စိန့်သြဂတ်စတင်းကျောင်း လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ မှတဆင့် မီးလောင် [Photos] | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » စိန့်သြဂတ်စတင်းကျောင်း လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ မှတဆင့် မီးလောင် [Photos]
စိန့်သြဂတ်စတင်းကျောင်း လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ မှတဆင့် မီးလောင် [Photos]
Posted by ပိုင်လေး on Dec 31, 2011 in Copy/Paste | 10 comments
စိန့်သြဂတ်စတင်းကျောင်း လျှပ်စစ်ဝါယာရှော့ မှတဆင့် မီးလောင် [+Photos]
ယနေ့ညနေ ၆ နာရီဝန်းကျင်က စတင် လောင်ကျွမ်းခဲ့သော ကမာရွတ် အထက (၂) ကျောင်း မီးလောင်မှုမှာ အချိန် တစ်နာရီခွဲ နီးပါးခန့် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီး လွန်ခဲ့သော ဆယ်မိနစ်ခန့်က (၇ နာရီ ၂၅ မိနစ် ဝန်းကျင်ခန့်) မီးငြိမ်းသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ကြောင်း၊ မီးငြိမ်းသတ်ရာသို့ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန် ဦးလှမြင့်တို့ လာရောက် ကြည့်ရှုကွပ်ကဲ ခဲ့ကြကြောင်း
The Voice Weekly မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်……………
သူငယ်တန်း ကနေ ၁၀ တန်း ထိ နေ ခဲ့ တဲ့ ကျောင်း လေး ပါ………….
ကိုယ်လည်း ၇တန်းကနေ ၁၀ တန်း အထိ နေခဲ့ဘူးတယ်။ ကြာတော့ကြာခဲ့ပါပြီ။
ခုတော့ ခုတော့ …အီး ဟီး…
Thanks God! ကျောင်းဆင်းချိန်ဖြစ်တာပဲကျေးဇူးတင်ရမယ်…
အော် ကိုဗမာရုပ် အဲလေ ကိုရုပ်ဗမာ အဲဟုတ်သေးပေါင် ကိုဗမာ(သို့)တရုပ် ရေ… ကျောင်းမတက်တာကြာတော့ Dec ကျောင်းပိတ်ရက်ဆိုတာမေ့သွားတယ်… ဘာပဲပြောပြော ခလေးတွေကျောင်းတက်ချိန်ဆို ပိုစိတ်ပူရမှာပေါ့..
တေဇခန်းမကြီးကို လောင်နေတာလား။ ရွာထဲမှာလည်း ကျောင်းကလူတွေ အများကြီးပါလား။ ကျောင်းပိတ်တုန်းမို့ တော်သေးတာပေါ့။ ကျောင်းက နည်းနည်းကျဉ်းတော့ ကျောင်းတက်ချိန် လောင်ရင် ကလေးတွေ ပြေးဖို့ မလွယ်ဘူး။
မြန်မာနိုင်ငံက ၀ါယာစနစ်တွေက အဓိကထားပြီးတော့ ပြုပြင်သင့်တယ် ခေတ်မမှီတော့တဲ့ဟာတွေလဲ သုံး၇၇င်သုံးနေတာဘဲ
တနှစ်တနှစ်မီးလောင်လို့ဆုံး၇ှုံးတားမနည်းဘူး ဒီနိုင်ငံတွေမှာဆိုသက်တမ်းကုန်၇င် ကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းလည်းပစ်လိုက်တယ် ကျန်ခဲ့တဲ့ ၁ နှစ်ကဆို၇င်ကျွန်တော်တို့ယူလိုက်တဲ. site project တစ်ခုက၀ါယာတွေဆို၇င် သက်တမ်းကနှစ်လေးဆယ်ပေးထားတာ လုံးဝအကောင်းတွေကြီးဘဲ မြန်မာနိုင်ငံက၀ါယာတွေအဲသလိုပြောင်းပစ်ဖို့ကောင်းတယ်